Sales teboka - Wenzhou Safewire Electric Co., Ltd
Antoka amin'ny varotra aorian'ny fivarotana
Sale teboka ny Safewire productsPlug sy Play:
Ny Insert alalan'ny terminal na Sokiro alalan'ny terminal optimally andian-tsoratra dia nanao fandaharana ho anao hanomboka fametrahana avy hatrany. Tsy vitan'ny hoe ny fitaovana, fa ny akaiky amin'ny fonony-vilia IP55 fiarovana ambaratonga koa elektrika miasa amin'ny hery sy ny tahirin-kevitra avy hatrany torohevitra. Avy hatrany dia ilaina ny fidirana amin'ny trano sy ny mpampiasa, satria mila fitaovana elektronika mifandray sy voampanga ara-potoana.
Cable fitantanana ny:
Close tariby fantsona hamaky ny ambany toerana ny asa. Data sy ny herinaratra mety hisaraka. Manasongadina ny mason fitaomana-trano fiarovana sy ny hafa toy ny fitsipika. Cable izay avy amin'ny tany dia afaka miditra mivantana ny rafitra fototra trunking.
Mampiditra multi-faladiany sy ny tahirin-kevitra na peo configurations ho iray feno fitaovana, miafina ambanin'ny fanaka na kabinetra ihany 80mm savaivony lavaka toy izany afa-toerana bebe kokoa.
Anisan'izany feno 45 * 45mm faladiany, seranan-tsambo roa sosona USB dovia ny 5VDC 3.0 manontolo USB malefaka marani-tsaina haingana fiampangana, fanohanana QC3.0, mitondra Qualcomm indentification Chip. Power tahan'ny fiovam-po dia afaka hahatratra 80%. Tsy vitan'ny tariby fifandraisana, fa manohana ny asa mamaly ny Wireless safidy mifanaraka amin'ny fitsipika ny Qi.
Ny tany an-jiro faladiany foana, na dia mora mifandray fitaovana mora. Izy ireo dia hita eo ambanin'ny removable coverplate na skirting ary misy amin'ny iray Stainless na varahina. Ankoatra izany, ny Pop-up rafitra dia miakatra tsikelikely, rehefa hariva, hafainganam-pandeha izay Adjustable. Toetra mampiavaka ny Pop-up rafitra ireo amin'ny ela-velona ny fotoana, azo antoka fampisehoana, kely tabataba sy miasa azo antoka sns damping device ity foto-kevitra efa patented ny Safewire.
Safety-mpiambina sy adala-porofo famolavolana
Indrindra ny herinaratra amin'ny faladiany dia manan-tsaina isan-karazany ao anatin'izany ny fiarovana fiasan'ny overcharge fiarovana, ny-Temp fiarovana, ny-malefaka fiarovana, fiarovana faritra fohy, eo ambany fiarovana-malefaka, be loatra ny fiarovana etc.
Ankoatra izany, ny tantara famolavolana ny tontonana mitandrina mifanindran-dàlana amin'ny tany toy ny mari-pahaizana 180 rehefa misokatra. Mety tsy ho lavo indray nandritra ny fametrahana. Ny seranan-tsambo miaro ny tariby dia afaka mitarika fivoahana tariby tariby avy tany amin'ny tany faladiany sy amin'ny fomba mahomby hiarovana ny tariby tariby manohitra manimba hoditra. Hivoaka ny Cable foto-kevitra efa patented ny Safewire.
© Copyright - 2010-2018: Zo rehetra voatokana. Fanohanana ara-teknika: globalso
ADD: rihana faha-2, Garden Wealth, Liushi Town, tanàna Yueqing, Wenzhou, Zhejiang, China